मेकअप हटाउने उत्तम तरिका - ज्ञानविज्ञान
मेकअप हटाउने उत्तम तरिका
सौन्दर्यका लागि मेकअप गर्नु सामान्यजस्तै भइसक्यो । तर, लामो समयको मेकअपले कुरूप पार्न पनि सक्छ । लामो समयसम्म छालामा मेकअप रहन दिनुहुँदैन । हरेक दिन साँझ मेकअप राम्रोसँग हटाउनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले आँखाको मेकअप हटाएर मात्रै अन्य मेकअप फाल्नतिर लाग्नुपर्छ । गाजलसहित आँखाको मेकअप हटाउन बेबी आयल प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ । बेबी आयल कुनै नरम कपडामा चोबेर आँखाको मेकअप हटाउँदा राम्रोसँग हट्छ । यसले आँखा सुक्खा हुनबाट पनि बचाउँछ ।
मेकअपमा प्रयोग गरिएका कलर कस्मेटिक हटाउन क्लिन्जिङ मिल्क प्रयोग गर्नुपर्छ । क्लिन्जिङ मिल्कले केहीबेर समय लगाएर बिस्तारै मेकअप हटाउनुहोस् ।
क्लिन्जिङ मिल्कले मेकअप त हट्छ, तर क्लिन्जिङ गरेको छालालाई त्यत्तिकै छाड्नुहुन्न । मेकअप सफा गरेपछि टोनर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । टोनरले क्लिन्जिङ गर्दा खुलेका छालाको प्वाललाई खुम्च्याएर सही अवस्थामा राख्न भूमिका खेल्छ ।
टोनर प्रयोग गरेपछि कुनै क्रिम अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् । क्रिम प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सुक्खा छालामा मोस्चर बढी भएको क्रिम लगाउनुपर्छ भने चिल्लो छालामा आयल फ्री क्रिम उपयुक्त हुन्छ ।
Don't Miss it बिहान अबेरसम्म सुत्नेहरुलाई हुन सक्ने खतराहरु
Up Next धरै सेल्फी खिच्दा हुने बेफाइदाहरु
1 hour ago Pradeep Karki
भाग्यमानी मानीसकाे हातमा मात्र हुन्छ यस्ताे रेखा
हातका रेखाले पनि हाम्रोबारे धेरै कुरा बोल्छन् । ‘हस्तरेखा शास्त्र’का अनुसार हतकेला, पञ्जा र औंलाले हाम्रो भविश्यबारे धेरै संकेत दिन्छन्…
आत्मविश्वास बढाउन शिव खेडाले दिएका यी सजिला सुत्रहरु
संसारमा जति पनि सफल मानिस छन्, उनीहरूको सफलतापछि आत्मविश्वासको ठूलो भूमिका छ । उनीहरूले आफैँमाथि विश्वास र ठूला–ठूला निर्णय गरेर…
सफल हुनको लागि गान्धीका फर्मुला
महात्मा गान्धी विश्वका यस्ता दार्शनिक हुन् जसले सिद्धान्त अध्ययन गरेर र अर्ती दिएर कसैलाई अनुयायी बनाएनन् अनि बन्नुपर्छ भनेर अड्डी…
स्वास्थ्यका लागि कतिको पोषिलो निगुरो साग ? जानिराखाैँ
वर्षा लागेको छ । यतिबेला बनजंगलमा च्याउ, निगुरो पाइन्छ । कतिपयले जंगलबाट खोजेरै तरकारीको छाक टार्ने गर्छन् । कतिपयले निगुरो,…
कुनै पनि व्यक्ति स्वस्थ हुनका लागि आफ्नो उचाईअनुसार तौल, पेटको गोलाई, शरीरमा बोसोको अनुपात मिलाउनुपर्ने पोषणविद् शाक्यको सुझाव छ ।…
निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस |
राति मिठो निद्रा लाग्यो भने बिहान उठेपछि मुड फ्रेस हुन्छ, एक किसिमको आनन्दको अनुभूति हुन्छ, अहाँ क्या मिठो निद्रा भन्ने…
यी रोगले सताउनसक्छ जाडोमा, यस्तो छ घरेलु उपचार
जाडोमा सताउनसक्छ यी रोगहरुले तर यसलाई घरमै गर्न सकिन्छ उपचार । सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि हामी अस्पताल धाउँछौं । तर, यस्ता औषधी…
खटिरा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यदि यसो हो भने यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
१. हल्का उम्रेको गेडागुडी बिहान बिहान खाने २. पानीमा तुलसीको पातको रस राखेर कुल्ला गर्ने ३. बदाम भिजाएर खाने ४.…
जाडोयाममा स्वस्थ व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने रुघाका लागि हाम्रो घरदैलोमै पाइन्छन् यस्ता जडीबुटी
बूढापाका, बालबालिका र जटिल स्वास्थ्यस्थिति भएकाहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीले समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । यस्ता व्यक्तिहरूले सामान्य रुघाखोकी हुँदा पनि…
यस्ता छन्, पेटमा हुने क्यान्सरको लक्षणहरु
धेरै डकार आउनु । चाँडै अघाउनु । बान्ता आउनु या आउलाजस्तो हुनु । पेटको माथिल्लो भागमा पीडा हुनु या गाह्रो…
राती सुत्ने बेलामा गर्न नहुने कामहरु
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई…